Cabdiraxmaan Cirro, gudoomiyaha xisbiga Waddani ee Somaliland
HARGEYSA, Soomaaliya - Gudoomiyaha Xisbiga Mucaaraadka ah ee Wadani Cabdiraxman Maxamed Cabdillaahi [Cirro] oo saxaafadda kula hadlay magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland ayaa eedaymo culus u jeediyay maamulka uu madaxwaynaha ka yahay Muuse Biixi.
Cirro oo safar shaqo uga soo laabtay dalka Itoobiya halkaasoo uu kula soo kulmay Diblumaasiyiin, madax dalkaasi ka tirsan iyo xubno kale ayaa ugu horayn maamulka Muuse Biixi ku dhaliilay inuu ka gaabiyay inuu Somaliland u raadiyo aqoonsi caalami ah.
Cadaallo daro, Tabashooyinka shacabka oo aanan waxba laga qaban, Dhaqaalaha, Xilal, Mashaariicyadda horumarineed oo aanna si siman loo qaybsan iyo Xarig sharci darro ah ayuu shaaca ka qaaday Gudoomiyaha Xisbiga Wadani inay kamid tahay waxybaaha uu ku fashilmay hogaanka haatan ee Somaliland.
Shaqo la'aanta dhalinyaradda, Sicir bararka Xagraha goostay, iyo Qeybinta Adeegyadda dowladda ayuu Gudoomiye Cirro farta ku fiiqay inay qayb ka yihiin dul-leelaha waa wayn ee maamulka Muuse Biixi iyo Xisbiga Kulmiye ka gaabiyay inuu wax ka qabto mudada uu xafiiska.
Dhamaan dhibaatooyinkaan oo ay wehliyeen walwal amni ayuu shaaca ka qaaday Gudoomiye Cirro inay gaar uyihiin Goboladda Sanaag iyo Sool ee Somaliland, isaga oo ka digay in hadii ay xukuumadda sii wado "ka dhaga-adeegista cabashooyinka shacabka ay horseedi karaan burbur umadeed iyo fashil dowladeed oo Somaliland soo food-saara".
"Wax ka qabashadda Tabashooyinka dhawaaqa dheer ee ka imaanaya shacabka waa waajib saaran dowladda, laguna xisaabtamayo sida waxay uga dhaqabato. Waxaana xaqiiqo ah in inta ay Tabasho jirto, amni darada jiri doonto," ayuu Cirro daba dhigay hadalkiisa.
- Jabahadda looga dhawaaqay Goboladda Barri -
Col. Caare oo kamid ah saraakiisha ciidamadda Somaliland ayaa wuxuu uga dhawaaqay gobolkada Bari ee maamulkaan gooni isku taaga ah ayaa wuxuu uga dhawaaqay Jabhad, isaga o sababta uu talaabadaan uqaaday ku sheegay cadaalo daro uu sheegay inay uwado maamulka Muuse Biixi.
Gudoomiye Cirro oo arrintaan si gaar ah udul-istaagay wuxuu dusha ka saarey Xisbiga taladda haya ee Kulmiye iyo Madaxwayne Muuse Biixi eeda ah inay ka gaabiyeen inay la fariistaan Col. Caare si loo xaliyo guud ahaan tabashooyinka uu soo gudbiyay.
Wuxuu ka fogeeyay Xisbigiisa Waddani uu xiriir dhow la leeyahay Col. Caare, isaga oo ku nuux-nuux saday inay diyaar uyihiin ka qaybqaashadda sidii wax looga qaban lahaa guud ahaan waxybaaha uu saluugay Col Caare, oo ay kamid tahay hanaanka cadaaladeed ee haatan jira.
"Xisbiga Waddani marnaba ma taageerayo Jabhayn ama Dagaalo, Xabad ama arrimo dhibaatooyin nabad-gelyo abuuraya, balse waxaan diyaar unahay inaan ka qayb-qaadano sidii loo xalin dhamaan cabashooyinka Col. Caare ka sheegay Qalabka warbaahinta," ayuu raaciyey Cirro.
- Doorashooyinka Gollaha Wakiiladda iyo Gollayaasha Degaanada -
Dhowaan waxaa lagu wadaa in degaanadda Somaliland ay ka dhacaan doorashooyinka Gollaha Wakiiladda iyo Gollayaasha Degaanada, waxaana Xisbiga Waddani gudoomiyahooda Cabdiraxmaan Cirro daboolka ka qaaday inay muhiim tahay in waqtigooda la qabto doorashooyinka.
Laakiin, Gudoomiye Cirro ayaa kahor inta aanan la guda gelin cod-bixinta uu afka ku balaairyay inay muhiim tahay dhowr arrimood uu sheegay in Xisbigiisa uu saluugsan yahay, inkasta oo uusan bidhaamin talaabadda uu qaadi doono Xisbigiisa hadaanan la xalin.
Hoos ka arag shuruudaha uu Gudoomiye Cirro ku xiray inuu Xisbigiisa qayb kaga noqon karo doorashada
In Madaxwaynuhu go'aan ka gaaro arrinta saami-qaybsiga Kuraasta Gollayaasha Baarlamaanka
In heshiis laga gaaro arrinta qoondada Kuraasta Haweenka iyo Beelaha laga tiradda badan yahay.
In la dhameystiro xeerka doorashooyinka ee isku dhafan
In la helo Guddi doorasho oo haysta kalsoonida dhamaan Xisbiyadda siyaasadeed ee Somaliland.
In tiradda xubnaha Guddiga doorashadda loogu qaybiyo dhamaan Xisbiyadda si siman.
- Qodoba kale ku jiray hadalkiisa -
Gudoomiye Cirro uu soo hadal-qaaday Barnaamij ay dhowaan daha-furtay xukuumadda Muuse Biixi oo dib loogu soo celinayo Hantida dowladda ayaa so dhaweeyay, laakiin wuxuu ku tartar-siiyay inay dadka laga soo celinayo Hantida la siiyo Magdhow.
Ugu dambeyn, Cirro ayaa ugu baaqay shacabka guud ahaan Somaliland inay ka shaqeeyaan Nabadda, islamarkaana ay ka dhiidhiyaan wax walba oo meel ka dhac ku ah nabad-gelyadda uu uu sheegay inay tahay waxa kaliya oo ay Soomaalida kale uga "fiican yihiin".
Muuse Biixi ayaa dhawaan ku eedeeyay Cirro in uu ka shaqeynayo sidii uu ku...